रोचक-विचित्र — Himali Sanchar
यस्तो समुदाय, जसले १३ सय वर्षदेखि जमिनमा टेकेको छैन
Posted by हिमाली संचार | रोचक-विचित्र
एजेन्सी –विश्वमा मानिसहरु विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दछन् । कोही गाउँमा त कोही शहरमा । कोही पहाडमा त कोही नदी किनारमा । तर के तपाइँले यस्ता मानिसहरुको बारेमा सुन्नुभएको छ, जो पानीमा बस्दछन् ? पानीमा त...बाँकी
पाँच सिटको कारभित्र १८ यात्रु फेला परेपछि प्रहरी चकित
केपटाउन – दक्षिण अफ्रिकामा ५ सिटको कारभित्र १८ जना यात्रु फेला परेपछि स्थानीय प्रहरी चकित परेको छ । अफ्रिकामा ५ सिट क्षमता भएको कारमा १८ जना यात्रु देखिएपछि प्रहरी समेत दंग परे। गुडिरहेको कारमा धेरै...बाँकी
श्रीमतीलाई थाहै नदिइ श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि …
Posted by हिमाली संचार | रोचक-विचित्र, समाचार, समाज-शिक्षा
स्याङ्जा – श्रीमान् श्रीमतीको सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद स्वभाविक हो तर यहाँ श्रीमतीलाई थाहा नै नदिइ सम्बन्ध विच्छेद गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । आफूलाई थाहा नै नदिइ श्रीमान्ले सम्बन्ध विच्छेद गरेको भन्दै सोमबार स्याङ्जा जिल्ला...बाँकी
यि हुन चोरसँग बिहे गर्ने अर्बपति महिला
Posted by हिमाली संचार | अन्तराष्ट्रिय, रोचक-विचित्र
लण्डन – स्कटल्याण्डमा २१ अर्ब रुपियाँ चिठ्ठामा जितेकी एक महिलाले चोरसँग विवाह गरेर सबैलाई चकित तुल्याइ दिएकी छिन् । गिलियन बेफोर्डले लोट्टोमा अर्बौं रुपियाँ जितेको १५ महिनापछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी थिइन् । ४६ वर्षीया गिलियन...बाँकी
यसकारण मोटीहरुका लागि स्वर्ग छ यो देश
एजेन्सी –बिहे हुनका लागि केवल सुन्दर देखिनुमात्र पर्याप्त छैन । यदि तपाइँ मरिससमा हुनुहुन्छ भने तपाइँ वजनदार पनि हुनुपर्नेछ । मरिसस यस्तो देश हो जहाँ जिउको वजन बढी भएका युवतीहरु बिहे गर्नका लागि तन्नेरीहरुको रोजाइमा पर्दछन्...बाँकी
संसारका टपटेन अरबपतिहरु कहाँ बस्छन् ?
Posted by हिमाली संचार | जीवनशैली, रोचक-विचित्र
यदि तपाइँसँग ५० करोड डलर भन्दा धेरै पैसा भयो भने तपाइँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो ? धेरैले पक्कै आफ्नो सपनाको संसार रोज्छन् । यहीँ प्रश्नको जवाफ खोज्ने कोसिस गरिरहेको थियो नाइट फ्रेन्क एलएलपी एजेन्सीले सन् २००९ देखि...बाँकी
भुपु लोग्नेले दिएको गुजारा भत्ता, दिनभर गन्दा पनि सकिएन
एजेन्सी । डिभोर्स गरेकी आफ्नी पूर्व पत्नीलाई पुरुषले दिने गुजारा अर्थात् मानाचामल बापतको रकम कति होला ? नाम नै गुजारा भत्ता भनेपछि त्यो सानो रकम नै होला भन्ने अनुमान हुन्छ । तर भारतमा एउटा यस्तो...बाँकी
किन अशुभ मानिन्छ १३ नम्बर, यस्ता छन् अनौठा तथ्यहरु !
Posted by Himali Sanchar | रोचक-विचित्र
एजेन्सी – दुनियाँमा १३ अंकलाई अशुभ मानिन्छ । आखिर किन ? १३ नम्बरको रहस्य के छ ? मानिसहरु यो अंकको प्रयोग गर्नमै हिच्किचाउनुको कारण के छ ? अझ पश्चिमी देशहरुमा १३ अंक प्रतिको विकर्षण र...बाँकी
एजेन्सी – दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्ग स्थित डिपलुस्ट सहरलाई दुनियाकै खतरनाक सहर भनिन्छ । त्यहाँ महिलाहरुमाथि बलात्कार हुनु सामान्य कुरा हो । हालै बीबीसीसँगको कुराकानीमा उक्त सहरका दुई युवकहरुले आफुले अहिलेसम्म कैयन् महिलाको बलात्कार गरिसकेको डरलाग्दो...बाँकी